PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-18 - Abuyela kwasifuba ngekaZondo
Abuyela kwasifuba ngekaZondo
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-18 - IMIBONO -
LOWO oke waba nguMengameli we-ANC neNingizimu Afrika uMnu Jacob Zuma uzokhumbuleka ngezinto ezahlukene esizweni.
Abanye bazomkhumbula ngokuba yigagu elalicula kuchwaze inkundla, abanye bamkhumbule ngekhono lakhe lokulawula imizwa ePhalamende noma bemhlokoloza.
Amaqembu aphikisayo afana neDA ne-EFF azomkhumbula njengomuntu owayewanikeza isizathu sokuthi asondelane ambeke esizweni njengesitha esikhulu esingenako okuhle. Lo mbono usuqala ukuguquka.
Ngaphakathi kwi-ANC kunabazomkhumbula ngokuthi iqembu lathelwa ngehlazo okhethweni lohulumeni basekhaya lwango 2016 ngaphansi kobuholi bakhe. Okubi ngalo muzwa ukuthi kukhona nababamba iqhaza ekungenzini kahle kweqembu kodwa abaziveza njengongcwelengcwele bese benza uZuma imvu yomhlatshelo.
Babodwa abakhetha ukukhumbula uZuma njengomholi owadedela umndeni wakwa Gupta ukuthi uzichanasele ezweni – ngisho nalabo abazuza ngokuba khona kwalomndeni.
Kuyiqiniso ukuthi uZuma ube yinkunzi emidwayidwa ngezizathu ezahlukene. Ngokunjalo kungephikwe ukuthi wayengeyona ingelosi. Kodwa-ke njengabo bonke abaholi waba nabo abamthandayo waphinde waba nazo izitha zezombusazwe.
Umehluko ngaye ukuthi nakuba engaseyena uMengameli kodwa ziningi izinto ezilokhu zimlandela nokwenza angalibaleki ezingqondweni zabaningi.
Nakuba zonke lezi zinto esengizibalile zaziwa ngabantu baseNingizimu Afrika, kukhona into eyodwa umlando oyomahlulela kahle ngayo uMsholozi. Leyo nto udaba lweKhomishana yeJaji uZondo.
Kuyiqiniso ukuthi uZuma wayengazimisele ukukhetha le Khomishana. Labo abakholelwa ekusebenziseni imizwa kunokucabanga ngokujulile basheshe bafika esiphethweni sokuthi ukungabi nesasasa kukaZuma ekukhetheni iKhomishana yingoba wayazi ukuthi izomembula izinqe. Kodwa-ke okuphawulekayo ukuthi imicabango kaZuma yayiphambili kunalokho izimbangi zakhe kwezombusazwe ezazikucabanga – ngaphakathi nangaphandle kwe-ANC.
Ngokuphoqwa yisimo wagcina eyiqokile iKhomishana kaZondo. Yini esesiyifundile ngeKhomishana kaZondo kuze kube manje? Lona akuwona umbuzo olula. Isizathu ukuthi kunabantu abangalithandi iqiniso nokuthi uma livela babuke eceleni. Ngizoveza eyami imibono ngale Khomishana.
Okokuqala, isikhathi sokuhlala kwale Khomishana asibanga sihle. Ukhetho lukazwelonke seluseMome.
Lokhu kusho ukuthi amaqembu ezombusazwe azoba nemihuzuko aye okhethweni exhugela. Iphutha kwaba umcabango ongajulile wokuthi iKhomishana izoqinisekisa izinsolo zokuthi uZuma nasondelene nabo yibona bodwa ababa yimbangela yokuqhwagwa kwamandla ombuso. Abazange bacabange ukuthi umkhonto kungenzeka ugwaze ekhaya.
Okwesibili ukuthi abanye bawofakazi abakha isithombe sokuthi banabo bonke ubufakazi obuveza ububi bukaZuma uma sebenikezwe ithuba lokuveza lobo bufakazi bayambundaza, babambe beyeka.
Okwesithathu ukuthi ofakazi bethula ubufakazi obushayisanayo ugcine ungazi ukuthi phakathi kwabo ubani ngempela okhuluma iqiniso.
Okwesine ukuthi kunofakazi okuyima bezama ukuqoqa ubufakazi uma sebebizelwe esigcawini baze bacele ukuthi kuhlehliswe ukuvela kwabo kanti kade babetshela isizwe ukuthi bazi konke.
Okwesihlanu, baningi abazongena ogibeni kunobekucatshangwa. Ngebhadi ayikwazi ukuhlehliswa iKhomishana ngoba isiyasebenza.
Kuyiqiniso ukuthi kwakufanele izinsolo ezazibhekiswe emndenini wakwaGupta noZuma ziphenywe. Okwaba ngamaphutha ukudweba uhlu lwezaphulamthetho iKhomishana ingakahlali nokuphoqelela ukuthi ikhethwe ngokushesha ekubeni ukhetho selusemnyango. Yilokho okwenza ngithi: Wayeshilo uZuma kodwa wangalalelwa!
*USOLWAZI Bheki R Mngomezulu usophikweni lwezifundo zepolitiki e-University of Western Cape. Ungumhlaziyi wepolitiki